रोचक Archives | Page2of 46 |
२०७७, १२ असार शुक्रबार १०:३३ June 26, 2020 ताजा खबररोचक
काठमाडौं। विवाह पछि सम्बन्ध बिग्रनाले धेरैको जीवनमा नराम्रो असर पर्न जाने गर्छ। श्रीमान-श्रीमती बीच आपसमा समझदारी हुन अपरिगार्य मानिने गर्छ। भन्ने गरिन्छ कि श्रीमान आगो भए श्रीमती पानि हुनु पर्छ। तर दुवै जनाको रिस बराबर भएमा भने कहिले पनि सम्बन्ध…
२०७७, ३ असार बुधबार १३:५२ June 17, 2020 ताजा खबररोचक
एजेन्सी- सामाजिक सञ्जालमा एक जोडी भाइरल बनेका छन् । कोरोना महामारीका बेला विवाहमा लगाएको मास्कका कारण उनीहरु भाइरल बनेका हुन् । त्यसो त कोरोनाभाइरसका कारण थुप्रै विवाह रोकिएका छन् । तर केहीले भने सामाजिक दूरी अपनाउँदै सीमित जन्तीकाबीच विवाह गर्दै…
काठमाडौँ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार कुनै पनि मानिसको बानि ब्यबहार उसको जन्मेको बार अनुसार थाहाँ पाउन सकिन्छ । मानिसको जन्मेको जन्मबार, महिना र समयले नै कुन दिन जन्मेको मानिसको ब्यबहार कस्तो र कति भाग्यमानी हुन्छ भन्ने पत्ता लागाउन सकिन्छ । ज्योतिषशास्त्रमा…
नेपालमा ज्ञानेन्द्र भन्दा अघिनै दुई राजाले गद्दीत्याग गरेका थिए , ती काे -काे हुन् ?
२०७७, २९ जेष्ठ बिहीबार १२:१० June 11, 2020 ताजा खबररोचक
बीबीसी : नेपालमा पनि राजाले विभिन्न कालखण्डमा गद्दीत्याग गरेको इतिहास पाइन्छ। आधुनिक नेपालमा दुई सय ४० वर्ष शासन गरेको शाहवंशमा पनि राजाले गद्दी त्यागेका तीनवटा घटना छन्। कस्तो परिस्थिति र कुन समयमा भए ती राजगद्दी परित्यागका घटना? इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालसँग…
२०७७, २७ जेष्ठ मंगलवार ११:४२ June 9, 2020 ताजा खबररोचक
काठमाडौं : स्त्री हरुकाे स्वभाव र पुरुषहरुको भाग्य स्वयम् भगवान् लाई पनि थाहा हुदैन कहिले र कहाँ गएर परिवर्तन हुन्छ भनेर ।मनिसकाे भाग्य तीन तरिकाबाट परिवर्तन हुन्छ भनेर ज्याेतिष तथा वस्तुशास्त्रका ठूलाठूला ग्रन्थ हरुमा उल्लेख गरिएकाे छ ।घर बनाएर नयाँ…
२०७७, २३ जेष्ठ शुक्रबार १४:०३ June 5, 2020 ताजा खबररोचक
काठमाडौं : अमेरिकी सेनाको उपल्लो तहमा पुग्ने पहिलो नेपाली महिला बनेकी छन् नेपाली चेली समृद्धि रिमाल। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको मेजर पदमा कार्यरत रिमाल ११ वर्षको उमेरमा परिवारका साथ अमेरिका पुगेकी थिइन्। त्यसअघि ११ वर्षको उमेरसम्म उनको प्रारम्भिक पढाइ नेपालमै भएको…
एजेन्सी। इण्डोनेसियामा एक १०० वर्षीया महिलाले को’रोना भाइरस माथि विजय हात पार्न सफल भएकी छिन्। स्थानीय मिडियामा उनलाई इण्डोनेसियाको सब भन्दा पुरानो बिरामी भनेर वर्णन गरिएको छ जसले को’रोनालाई हरा उन सफल भइन । कामतिम नाम गरेकी ती बृद्ध महिला…
पछिल्लो १० बर्षदेखि म बच्चालाई आफ्नो पेटमा हुर्काउन र उसलाई जन्म दिने सपना देखिरहेको छु । तर, म बच्चा सँधैका लागि आफूसँग राख्न चाहान्न, न त म आमा नै बन्न चाहान्छु । यसै कारणले मैले ‘सेरोगेट मदर’ बन्ने निर्णय लिएँ,…
एजेन्सी । जुनकिरी एउटा यस्तो अचम्मको किरा हो जसको आफ्नै शरीरमा बत्ती बल्ने गर्दछ । शरीरमा बल्ने बत्तीकै कारण स-साना बलबालिकाको बिचमा यो निकै लोकप्रिय रहेकाे छ । बेलुकाको समयमा पुच्छरतिरको भाग बत्ती जस्तै चम्किने भएको जुनकिरीको पनि आफ्नै प्रकारको…
२०७७, ८ जेष्ठ बिहीबार १४:५० May 21, 2020 ताजा खबररोचक
ऐजेन्सी । विवाह गर्ने उमेर भएपछि आमबुबाले आफना छोराछोरीको लागि योग्य वर वधु खोज्ने गरेका हामी बसैलमर्य थाहा नै छ । विभिन्न पत्रपत्रिकामा समेत विवाहको विज्ञापन नै छापिने गरेको छ । तर भारतमा भने एउटा अनौठा घटना भएको छ ।…